Shirka Watashiga Beesha Mudulood oo magaalada Muqdisho ka furmay – Banaadir weyne
Waxaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho shirka watashiga beelaha Mudulood iyadoo ay ka soo qeybgaleen duubabka dhaqanka Beesha, Xildhibaanada labada Gole Baarlamaanka Federaalka, xubno ka tirsan Dowlad goboleedka Hirshabelle, Siyaasiyiin, Madaxweynayaashi hore.
Kulankan ayaa waxaa laga soo jeediyay qudbado ay soo jeediyeen mas’uuliyiintii ka soo qeybgashay iyadoo la rajeynayo in dhamaadka shirka laga soo saaro war murtiyeed ku saabsan qodobada shirka.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo ka mid ah mas’uuliyiintii ka qeybgashay ayaa waxa uu ku baaqay in shirkan uu noqdo mid sii ballaarto oo dhammaan beelaha Soomaaliyeed loogaga sii gudbo.
Cali Mahdi Maxamed ayaa carabka ku dhuftay in dalka uusan ka dhicin shir dib u heshiisiin dhab ah loona baahan yahay in Soomaali ay si dhab ah u heshiiso.
Mar uu ka hadlay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya warar sheegayay in shirka wadatashiga Mudulood la joojiyay ayaa sheegay inaysan suurtogal ahayn in la caburiyo shacabka ayna xaq u leeyihiin inay shiraan.
Sidoo kale furitaankii shirkan ayaa ka hadlay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxana uu xusay in shirkan wadatashiga uu yahay mid muhiim u ah shacabka Soomaaliyeed oo idil.
“Soomaali sidii ay isu xukumi lahayd ayuu dhibka ka taagan tahay, waa soo bilownay annagoo inta soo gaarin ayay naga dhamaatay, dhisida maqaamka Muqdisho qabyada ayuu ka mid ahaa,waa in dadkaan ay tashadaan horumarinta dowladnimada,haddad ogolaatid in si xun lagula dhaqmo oo aad iga dhaaf mar walba tiraahdid, ma aha in la aqbalo,dulqaad badan ayay muujiyeen waan ku amaaneynaa waana ku dhiirigelinaynaa, ma ku dhiirineyno inay ka tanasulaan xuquuqdooda,”ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud.
Sidoo kale Mas’uuliyiintii furitaanka shirka ka hadashay ayaa waxa kamid ahaa Wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cali Caadle waxana uu ka warbixiyay wasiirka xaalada dowlad goboleedka Hirshabelle. – Jowhar News